Tag: horonan-tsary 3d | Martech Zone
Tag: horonan-tsary 3d
Manangana andiana dinidinika vaovao eto izahay ato ho ato ao amin'ny bilaogy teknolojia marketing miaraka amin'ny fanampian'ny Creative Zombie Studios. Ny podcast misy antsika miaraka amin'ny Edge of the Web Radio dia mahavariana ary mandeha amin'ny faritra isam-paritra any Indianapolis ny asabotsy tolakandro ao amin'ny Freedom 95… fa indraindray mila mandalina lalindalina kokoa miaraka amin'ny talenta izay te-hiresaka isika. Miaraka amin'ny mozika any an-tsehatra avy amin'ny tarika sakaizany, i Brad sy ny ekipany dia niara-nanangana feon-kira fampidirana feo
Angamba ianao efa nahita tranokala marobe mampiasa horonan-tsary mihetsika amin'ny pejin'izy ireo. Tsy maninona raha omenao azy ireo ny video manazava na horonan-tsary; samy manana ny tanjony avokoa izy rehetra: manazava ny vokatra na serivisy amin'ny fomba mora sy haingana, izay mahatonga azy ireo ho fitaovana marketing lehibe ho an'ny orinasa rehetra. Fa maninona no misy karazana horonan-tsary manazava? Ny fomba tsirairay dia manintona karazana mpihaino hafa ary hisy fiantraikany amin'ny tetibolan'ny